Ukuhluma ukolweni kuhle
Namuhla, kuqhutshwa izifundo eziningi, ngokususelwa ekutadisheni izinzuzo zegciwane legciwane kanye nomphumela walo emzimbeni womuntu.
Ukwakhiwa kwegciwane legciwane
Umzimba ugcwele ngokugcwele ukolweni, cishe awunakho ukuphikisana. Ukukhamba okolweni akulula ukusebenzisa umkhiqizo, kodwa isithasiselo semvelo esiyasebenza. Amabele okuvuna ajwayelekile aqukethe amaprotheni angu-20, kanti inani lamaprotheni elihlume ukolweni lifinyelela ku-26%.
Yini ewusizo kumabele okusanhlamvu okuhlwanyelwe?
Lapho ukolweni ukhula, isitashi siba ngamaltose, namafutha acids asebenzayo emzimbeni avele esikhundleni samafutha. Ekuvuneni kukhona amaprotheni izinto eziwela phansi zibe amino acid , futhi kamuva zibe nucleotides. Ingxenye engazange ifakwe umzimba iyaqhubeka ihlukana phakathi kwezizinda ezahlukene. Lezi zisekelo ziyisisekelo sokwakhiwa kwe-nucleic acid, ezakha isisekelo sezakhi zofuzo. Okusho ukuthi, umzimba uthola impahla, ongayithola ngayo kuzo izifo eziningi.
Ukudla umuntu ovuthiwe ukolweni uthola umkhiqizo oyingqayizivele ongadingi umzimba ukuba uphule amafutha, amaprotheni nama-carbohydrate. Ngokungafani nezinye izithako ezinikezwa ama-pharmacy, sithola amavithamini namaminerali ngendlela elula futhi elinganisiwe.
Izakhiwo eziwusizo zokhuni oluhlwanyelwe
Ukusetshenziswa njalo koroyi okuhlwanyelwe kungasungula izinqubo zomzimba emzimbeni. Izwi elivamile lomuntu liyathuthukisa, ukumelana nezifo kuyanda, ukukhulelwa kwengculazi kuphakama. Kunconywa ngokukhethekile ukuthi usebenzise ukolweni oluhlumekile ngokukhathala, ukuzivikela okubuthakathaka, ngesikhathi sofuba lwesifo somkhuhlane, emva kokwelashwa kwezifo ezihlukahlukene. Ukolweni ohlumekile usetshenziselwa ukubuyisela isimiso sezinzwa ngemva kokucindezeleka nokucindezeleka. Izimo zokujwayelekile zomsebenzi wezocansi zivame kakhulu.
I-magnesium, equkethe amahlumela kakolweni, ehlisa ukucindezelwa kwegazi futhi isuse i- cholesterol egazini. I-fiber engenayo igalelo ekuthuthukiseni ipheshana lokugaya. Umzimba uhlanzwa yi-toxins nama-radionuclides. I-fibre e-soluble ifaka isandla ekubuyiseleni kwe-microflora yamathumbu.
Ukuqukethwe kwekhalori wegciwane lengqolowa ngu-kcal ka-kcal nge-100 g yomkhiqizo. Ibuye isetshenziselwe ukukhuluphala noma ukukhathazeka komzimba. Uma udla igciwane elincane likakolweni, ungathola okwanele futhi ukhululeke ngokwakho kokulamba.
Soy inyama - okuhle nokubi
I-Suluguni ushizi - okuhle nokubi
Ukuzivocavoca "birch" - okuhle nokubi
Izithelo zomvini zihle futhi zimbi
I-carp yesiliva - okuhle nokubi
Ngingakwazi yini ukuphuza amanzi esiswini esingenalutho?
Kungani amanzi carbonated ayingozi?
Opyata - okuhle nokubi
I-Buckwheat, igcwele i-yogurt ebusuku
Izinzuzo ze-birch sap yomzimba
Izinzuzo zepelepele yaseBulgaria
Mangaki amakhilogrekhi aneshokoledi?
Iviki eli-20 lokukhulelwa - ukuxhumana kokuqala nengane kanye nemizwa kamama
I-polypic urethra kubantu besifazane - izimpawu
Isiko lokukhuluma nokuxhumana kwebhizinisi
U-Inna Volovichova walahlekelwa kanjani isisindo?
Kungenzeka yini ukunciphisa izimpande zomhlaba we-monster?
Ubude obufanele bengubo besifazane
Luhlobo luni lobulili amadoda abuthandayo?
Ubhanana obomile - kuhle nokubi
Ukubopha kanjani ihembe ngezikhulumi?
Indlela yokufunda ukuqamba amanga?
Ukuthuthwa kwegazi kusuka emathangeni
Izingubo zokusika eziqondile 2013
Kudla ngendlela yenkosi
Umthwebuli wezithombe usiza izinja zisuka endaweni yokukhosela ukuthola ikhaya elinothando!
Sofas encane nombhede
Itafula lekhofi ngeglasi